အစခုစ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » အစခုစ
Posted by ムラカミ on Feb 7, 2012 in Photography | 26 comments
asakusa Japan Photo tokyo
အစခုစ ဆိုတဲ့ မြို့ ကိုရောက်တုန်း ရိုက်နှက်ထားတာလေးတွေ ရှဲချင်ယုံပါ …..
စာမရေးဖြစ်ပေမယ့် ပုံ နည်းနည်းရိုက်ဖြစ်နေသေးတဲ့အတွက် ….
၁. တံတားပေါ်က တိုကီယို စကိုင်းထွီး..
၂. ပုံဟောင်းလေး တစ်ပုံပါဗျာ…
၃. ရှိတမချိ တဲ့ …… တောဆန်တဲ့မြို့ ဆိုပဲ…
၄. ပုံဟောင်းတပုံပါ …. ပြန်ပြောပြဖို့ အတော်ခက်လိမ့်မယ့် အတွေ့အကြုံတခု အမှတ်တရပါဗျ…
၅. ယခု မဖွင့်သေးပေမယ့် လက်ရှိ တိုကီယိုရဲ့ အမြင့်ဆုံး တာဝါ …စကိုင်းထွီးရဲ့ ရေထဲက ပုံရိပ်
၆. ခမိနလိ မွန်း တဲ့ … မိုးကြိုးဂိတ် ဆိုပဲ…
၈. ဂိတ်၂ခုကြားက ဈေးတန်း
၉. ဘာမှန်းမသိတဲ့ မီးပုံးစိမ်း …
၁၀. ရှရိုင်း ဆီသွားတဲ့ ဈေးလမ်း
၁၁. ဈေးလမ်းကို ကန့်လန့်ဖြတ်တဲ့ အခြားသော ဈေးလမ်း …
၁၂. ဆော့ဖိုးကပ်စ် မသုံးထားပါဘူးဗျာ ..သူ့ဟာသူ မုန့်ဆီကြော်လိုဟာ ကြော်နေလို့ မှုန်သွားတာပါ…
၁၃. ဘာမှန်းမသိတဲ့ အပေါစား ရိုက်ချက်တခု..
၁၄. နေ့မြင်ကွင်း တခု…
၁၅. ရှရိုင်း လား တန်ပယ်လား .. ကွမ်နုံးလား …
၀ါသနာပါရင် ငြင်းကြပါ …. သို့သော်…
၁၆. လမ်းကြားထဲက အရုပ် (ဒင်းတောင် ကျုပ် ရိုက်တာ မခံချင်ဘူးကိုး …. ကတောက်ခ်….)
၁၇. ကျနော် နှစ်သက်မိသော ပုံ ၁ပုံ
သို့သော် အမွေအနှစ်တွေ ကျန်တဲ့မြို့…
ဂေးရှားတွေ ရှိသေးတဲ့မြို့ ….
အစားအသောက်တွေကို ရှိုးကေစ့်မှာ ပြထားတဲ့
အတုတွေ (အလွန်တသွေမတိမ်း တူတာတွေ)
တိုကီယိုရဲ့ …အကြီးမားဆုံး မီးပန်းပွဲတော်ကို နှစ်တိုင်းကျင်းပပြီး..
တိုကီယို အမြင့်ဆုံး အဆောက်အဦ ရဲ့ အလှဆုံး မြင်ကွင်းတွေ မြင်နိုင်တဲ့မြို့
အစခုစ အကြောင်း သည့်ထက်ပို သိချင် စိတ်ဝင်စားရင်
P.S မနှစ်က ပုံဟောင်းတချို့ ရောနှောတင်ဆက်မိတာ
စိတ်မဆိုးစေချင်ဘူးဗျာ …. အစခုစ ဆိုတဲ့ တော့ပစ် ကို တည်ပြီး
ကျနော် ရိုက်ဖူးသမျှလေး ရှဲမိတာပါ..
နားလည် ခံစားပေးမည် ဟု ယုံကြည်ပါကြောင်း………….
အစခုစဆိုတော့ ..”ထ”ပဲ”က”ရမလိုလို.. “ခု”ပဲ “စ”ရတော့မလိုလိုနဲ့.. သူလည်း မားကက်တင်းသမားကောင်းကြီးဖြစ်လို့…
ခေါင်းစဉ်ပေးတော်တာမို့ သတင်းသမားကောင်းလို့တောင် ပြောရနိုင်တယ်..။
တကယ်ပဲ ၀ီကီ ကသွားတူးလာသကိုး …
မဟာယာန ဇမ်ဝါဒ ဘာညာ ဖစ်လာမှာစိုးလို့ ..ဆန်းဆောဂျိထဲက
၁၀ ၊ ၁၁၊ ၁၃ အနှစ်သက်ဆုံးပဲ ။ လူသားဆန်တဲ့ ဘ၀တွေပါလို့။ နီးစပ်လို့။
အစခုစ မြို့ က အစက နေ ပြန်ပြီး ဒီလိုအနေအထားရောက်အောင် ထူထောင်ထားတာဆိုတော့ အားကျစရာပေါ့။ လူသားတို့ရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုကြောင့် အောင်မြင်တ့ အောင်မြင်မှုတွေထဲ့ တခုပေါ့။
အော် ဘာရယ်မဟုတ် အစခုစဆိုလို့ သတိရမိတဲ့ ကိုယ်တွေ့လေးတခု ပြောပြရအုန်းမယ်။
နေရင်းထိုင်ရင်း ဘာမှလည်း မဟုတ်ပဲ ဖွင့်လက်စ လည်ပတ်နေတဲ့ ဆိုင်ကို ဆိုင်ရှင်နဲ့ အခန်းငှားခ ပြောရင်း စိတ်ဆိုးသွားတာနဲ့ စိတ်မြန်ကိုယ်မြန် ပိတ်ခဲ့ဖူးတယ် ။ ငယ်သေးတော့ စိတ်ဆတ်တာလည်း ပါတာပေါ့။
လုပ်ပြီးတော့မှ နောင်တရသလိုလို တနုံ့နုံ့ နဲ့ ။ သိပ်မကြာဘူး။ အဲ့ဒီနေရာ မီးအကြီးအကျယ်လောင်ပါလေရော။ အဲ့တော့မှ သိတယ် ။ ကံဖယ်တာလို့ ။
တခါတရံမှာ အပြောင်းအလဲ တခုက သိပ်ကို စိတ်ရှုပ်ထွေးပြီး စိတ်ညစ်စရာ စိတ်ဓာတ်ကျစရာတွေနဲ့ စတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့နောက်ကွယ်မှာ လျှို့ဝှက်ထားတဲ့ အကောင်းလေးတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ ခါးသက်တဲ့ အရသာရှိပေမဲ့ ရေသောက်လိုက်ရင် ချိုတတ်တဲ့ အရာတွေ အများကြီးပဲ ။
cheer up!!!!!!!!!!!!!!!! come on !!!!!!!! you can do it, feel it…..
တိုက်တန်းနစ် စီးရင်း သေတာကမှ ဂုဏ်ရှိဦးမယ်
အသက်ကယ်လှေ မှတ်လို့ ခုန်ချလိုက်တယ် ဗိုက်မှာ အပေါက်ကြီး နဲ့ဆို တွားဘီ တွားဘီ ….
ခုတော့ သည်လိုပဲ အားလုံးစိတ်လျှော့ထားလိုက်ပါရဲ့….
အရင်ကနယူးရီးရားတိုင်းရောက်လေ့ရှိတဲ့နေရာလေးပေါ့ အဲဒီကတန်ပူရာနဲ့မိုချိက စားလို့အကောင်းဆုံး (လွမ်းမိပါ၏)
ကိုအောင်လည်း အရင်က သည်မှာ နေသွားသကိုး …။
ကျနော်ကတော့ ပြောင်းဖူးပြုတ် ဒုတ်ထိုးကို ပိုကြိုက်တယ်ဗျို့ …။
သိနေသလိုဘဲ။ jk ;-)
Post Card လေးတွေ ကို ကြည့်ရသလိုမို့ပါ။
ပုံ ၁၆ ကို အကြိုက်ဆုံး
အားပေးသွားလို့ ကျေးကျေးပါ အရီးတော်..
တခါက မေးမယ် ပြောထားတဲ့ အော်ရီကဲ ကိစ္စ ပြေလည်တွားဘာဘီ ..။
အကွက်တွေ့ပြီ မောင်ဂီကို စာပြင်ရမယ်ဆိုပြီး
စ-အခုစ ဖြစ်ရမှာ မဟုတ်ဘူးလား လို့
(၄. ပုံဟောင်းတပုံပါ …. ပြန်ပြောပြဖို့ အတော်ခက်လိမ့်မယ့် အတွေ့အကြုံတခု အမှတ်တရပါဗျ…)
မှာ အင်နင်ရှယ် ထိုးထားတာကိုက ပြန်ပြောပြစရာ ဖြစ်နေပြီ။
စကိုင်းထွီးရဲ့ ရေထဲက ပုံရိပ်ကို ကြိုက်တယ်။
(၁၆. လမ်းကြားထဲက အရုပ်) ပုံကို ကြိုက်တယ်။
ဓာတ်ပုံဆရာကို အားနာပါးနာ လက်မခံပဲ ပြတ်ပြတ်သားသားငြင်းလို့
အားပေးသွားတာ ကျေးကျေးပါ အန်ကယ်လ် မာ ရယ်…
၆ နဲ့ ၇ က အလုံးကြီးတွေကဘာလဲဟင်။ အဲဒီမှာတော်တော်ဓါတ်ပုံရိုက်ကြတယ်နော်။ ဟိုနေ့ကအသိတယောက်ပို့လိုက်တဲ့ပုံကလဲအဲဒီအလုံးကြီးနဲ့ရိုက်ထားတယ်။ ဘာလဲဟင်။
ဂိတ်နာမည်ရေးထားတဲ့ အထိန်းအမှတ် မီးပုံးကြီးတွေပါချင့်
ဂျပန်သမီးလေးတွေများ မတွေ့မိဘူးလားကွယ်..။ ကြောင်ကြီးက ဂျပန်မဆိုသိပ်ကြိုက်…ရုပ်ရှင်ထဲမှာပဲ လှကြတာပါ၊ အပြင်မှာ သိပ်လှတာ တွေ့ဖူးသေးဘူး..။ ရှိသေးရင် နည်းနည်းကျွေးပါ..။
မီးပုံး အနီကြီးတွေနဲ့ နေရာက ဘယ်နားလဲတော့ မသိဘူး..
ဆူး ရောက်တုန်းက အဲလို မီးပုံး အနီကြီးတွေ ချိတ်ထားတဲ့ နေရာနဲ့ အဆင်းလမ်းက ဈေးတန်းတွေ မုန့်အလကား လျှောက်စားတာ သတိရမိတယ်။ အဲဒိနေရာ နာမည်လေး မေ့နေပြီ ဟုတ်မဟုတ်တော့ မသိတော့ဘူး.. တူတော့ တော်တော် တူနေလို့..
ခရီးသွားတုန်းက ရှင်းပြတဲ့ ဂျပန်ဂိုက်က ကားပေါ်က မဆင်းခင်ကတည်းက သင်ပေးထားတယ်။ မုန့်ဆိုင်တွေ့ရင် အကုန်နိုက်စား ပါးစပ်ထဲ မုန့်ဝင်သွားတာနဲ့ ခေါင်းကို ၆၀ ဒီဂရီလောက် စောင်းပလိုက်.. မကြိုက်ဘူး ဆိုပြီး မျက်နှာမျိုးနဲ့ တခုပြီးတခု နိုက်စားပြီးတော့ နောက်တပတ်ပြန်လှည့် ပြီးတော့ ရေနွေးကြမ်းတောင်းသောက်တဲ့.. သူပြောသလိုတော့ လုပ်ရဲပါဘူး စိတ်ထဲမှာ အလကားစားရတာ အားနာတာနဲ့ စားလည်း စားခဲ့တယ် ၀ယ်လည်း ၀ယ်ခဲ့တယ်။
ဟီဟိ။ အတော်ပဲ။ အဲလိုဆိုရင်ဂျပန်သွားရင် ထမင်းဖိုးစရိတ်ထည့်မတွက်တော့ဘူးနော်။
ကိုဆူး က ဒါလည်း သိတာပဲကိုး ..
ခစ်ခစ် ..ဟုတ်တယ်ချင့် …
ခေါင်းလေးစောင်းပြီး …ချော့တို …လို့ပြောတတ်ရင်ကို….
ဖလာကျိတ် လို့ရပီ …
လေဒီ ဂီဂီ တို့ဆို ဒါမိုး ကျိတ်နေကြ ….
တိုကီယို လာခဲ့တယ် ဆိုရင်တော့ သည်နေရာပဲ ဖြစ်မှာပါ
တိုကျို လည်း ရောက်တယ် ကျိုတိုလည်း ရောက်တယ်။
မြို့နာမည် ၂ခုက ပြောင်းပြန် ဖြစ်နေလို့ မှတ်မိနေတာ..
ဂင်ဇာ အရပ်မှာ အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ ဈေးဝယ်ပြီး ဒူးခိုက်နေတာ အခုထိ မှတ်မိသေးတယ်။
ရေပူစမ်းမှာ ရောင်းတဲ့ ဆိုင်က လက်သည်းခွံလောက်ပဲ ရှိတဲ့ ဂဏန်းသေးသေးလေးတွေ အချိုနဲ့ ကြော်တာလား လှော်တာလားတော့ မသိဘူး.. ၀ါးလို့ ကောင်းတယ်။
အဖွဲ့က လူစောင့်နေရာ သတ်မှတ်ထားလို့ မလာသေးတဲ့ လူတွေ စောင့်စောင့်ရင်း ပျင်းတာနဲ့ တပတ်ပြီး တပတ် ဂဏန်းလေးတွေ နိုက်စားတယ်။ တပတ်ပတ်ပြီးရင်.. ဂျာပွန်မ အရောင်းစာရေးက ဗန်းထဲကို ကြည့်လိုက်.. လာဖြည့်လိုက်ပဲ.. ဟိဟိ..
စားခဲ့ သောက်ခဲ့ရတာ အခုမှ တခုချင်း သတိရလာမိတယ်။
အမတို့ က ဘယ်အချိန်ရိုက်ရိုက် လှနေတာဘဲဗျာ…
၀မ်းဒေးကျရင် အမလို ရိုက်နိုင်အောင် သများကြိုးစားပါဦးမယ်နော်..
ဒီလိုလည်း မီဟုတ်ပါဝူး အစ်မရယ်…
သများက သဂျီး ပလေးဘွိုင် မဂ္ဂဇင်း ဖရန်ချိုက်စ် ယူပီး
ပြန်လာတဲ့အခါ အလုပ်လျောက်ရအောင် လေ့ကျင့်နေတာပါ….
လူတွေလည်း ကျားတွေက မဖြစ်ပြီး မတွေက ကျားဖြစ်ကုန်ပြီ မဂီရေ့။
လက်မလေး တစ်ချောင်း သိသိသာသာကြီး ထောင်ပစ်ခဲ့မယ်။
စာကြွေးလေးတွေ လည်း ဆပ်ပါဦး။
ရှိတယ်ဆိုရင်လည်း အေးအေးဆေးဆေး စိုက်နိုင်ပါတယ်ဗျာ။
အားပေးသွားတာ ကျေးကျေးပါ အန်တီမဟူရာ ရယ်…
သများမှာ ခရီးယာယီတွေအပြင် အပြောင်းအလဲတွေ
အတော်လေး ကြုံနေရလို့ ခုတလော ဈာန် မ၀င်စားနိုင်လို့ပါ….
အချိန်ရရင်တော့ …ကျမဘ၀ ကို ဆက်ရေးဦးမှာပါ…
နေရာလေးတွေနဲ့ စာလေးတွေ ရေးပေးရင် ပိုကောင်းတယ်နော်… မရောက်ဖူးတော့ ရောက်ဖူးသလို ခံစားကြည့်ချင်လို့….
ဂီရေ ကျေးဇူးပါ မရောက်ဖူးတဲ့နေရာတွေ ဂီဓာတ်ပုံတွေကြောင့် ရောက်သလိုခံစားရတယ် မုန့်ဆီကြော် ကြော်တဲ့နေရာကပုံကိုကြည့်တော့ ညှော်သလိုတောင်ခံစားရတယ် ဟပ်ချို… အခိုင်ကအညှော်နံဆိုကြောက် တယ် နှာခေါင်းမကောင်းလို့…. ကမ်းခြေဘက်တွေသွားရင်လည်း ရေပြင်ရဲ့အလှလေးတွေရိုက်ပြီးတင် ပေးဦးနော် အခုမှ ရွာထဲရောက်တော့ ဂီတို့ပို့စ်တွေကို အသည်းအသန်လိုက်ကြည့် မှတ်သားနေရတယ်… နောက်ကျမှ သိတာစောရီးနော်…….